Mamerina mieritreritra ny fanatontosana ny varotra B2B? Ity ny fomba fividianana fanentanana mandresy | Martech Zone
Mamerina mieritreritra ny fanatontosana ny varotra B2B? Ity ny fomba fisafidianana fampielezan-kevitra mandresy
Talata, May 19, 2020 Alakamisy, May 21, 2020 Bonnie Crater
Rehefa manitsy ny fampielezan-kevitra ny mpivarotra hamaly ny fihenan'ny toekarena avy amin'ny COVID-19, dia zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny fahalalana ny fomba hisafidianana mpandresy. Ny metrika mifantoka amin'ny vola dia mamela anao hanokana vola amin'ny fomba mandaitra.
Mampihetsi-po nefa marina: ny paikad-barotra momba ny varotra nanomboka nampihatra tamin'ny Q1 2020 dia efa lany andro tamin'ny fotoana nanodinana ny Q2, notsofin'ny krizy COVID-19 sy ny fatiantoka ara-toekarena nateraky ny valanaretina. Ny vokany eo amin'ny orinasa dia misy olona an-tapitrisany voan'ny hetsika nofoanana. Na dia manandrana misokatra indray aza ny fanjakana sasany, tsy misy tena mahalala hoe rahoviana no hiverina ny asan'ny asa toy ny roadshow sy ny kaonferansa indostrialy.
Ireo mpivarotra dia tsy maintsy mieritreritra ny drafitra fanatrehany manoloana ireo fanovana ireo. Sampana marketing maro no manana fampielezan-kevitra mihemotra ary mampihena ny tetibola. Saingy na ny ekipa marketing izay mandroso amin'ny setroka feno aza dia manitsy ny paikadiny hita taratra ny zava-misy eny amin'ny tsena vaovao sy manatsara ny ROI. Amin'ny lafiny B2B indrindra, ny fampiroboroboana ny fifaninanana dia tsy maintsy hamaritana fa ny dolara tsirairay avy amin'ny teti-bola dia manome fidiram-bola - ary afaka manaporofo izany ny mpivarotra.
Ny mpivarotra B2B sasany dia namerina nanitsy ny fomba fiasa tamin'ny alàlan'ny fanovana ny fandaniana natokana ho an'ny hetsika, ankehitriny amin'ny fantsona nomerika. Mety hahomby izany, indrindra raha nanitsy ny mombamomba ny mpanjifa tonga lafatra izy ireo raha te hanana toe-karena vaovao. Misy dikany ihany koa ny fikarakarana ireo fotokevitra hafa toy ny famakafakana ireo metaly fandoroana mba hanomezana lanja marina ny vola miditra amin'ny fampielezan-kevitra, toy izany koa ny fitsapana ireo fitambarana hafatra, karazana atiny ary fantsona hamaritana izay mety indrindra.
Raha vantany vao voaresaka ireo pitsopitsony dia misy fomba maro ahafahanao mandinika ny angon-drakitra amin'ny ambaratonga goavam-be kokoa hahitana raha toa ka miasa tsara ny programa marketing nomerika B2B anao ary mamaritra hoe iza no mitondra ny vokatra tsara indrindra amin'ny fidiram-bola. Ny mason-tsivana nomen'ny vahaolana nomerika nomerika dia hilaza aminao izay fampielezan-kevitra mamokatra tsindry sy fijerin'ny pejy, izay ilaina. Fa raha hanao antsitrika lalindalina kokoa, mila data ianao izay manome ny fahitana ny fiantraikan'ny fampielezan-kevitra amin'ny fidiram-bola sy ny varotra.
Ny fijerena ny angon-drakitra fanentanana fitakiana fitakiana tantara dia toerana tsara hanombohana. Azonao atao ny manadihady ny fisarahana eo amin'ny fivezivezena nomerika sy tsy nomerika ary mamaritra ny fomba nitondran'ny singa tsirairay ny varotra. Izany dia mila maodely fanolorana fanentanana. Ny maodely "mikasika voalohany" izay mitarika amin'ny fihaonana voalohany nifanaovan'ny orinasa sy ny mpanjifa ho avy dia hampiseho fa ny fampielezana dizitaly dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famoronana fahalianan'ny mpanjifa vaovao.
Mety manazava ihany koa ny mamantatra hoe iza ny fampielezan-kevitra nisy fiantraikany tamin'ny varotra indrindra. Ny tabilao etsy ambany dia maneho ny fiantraikan'ny fampielezana nomerika sy tsy niomerika tamin'ny varotra tamin'ny ohatra iray:
Ny fandalinana ny angon-drakitra ara-tantara toy izao dia afaka manome fomba fijery manandanja rehefa mamerina mandahatra ny paikadim-barotra mba hanamafisana ny fampielezana dizitaly. Izy io dia afaka manampy anao hisafidy mpandresy rehefa mandinika safidy isan-karazany ianao.
Ny metatra haingam-pandeha dia singa iray hafa manan-danja amin'ny fisafidianana ny fampielezan-kevitra mandresy. Velocity dia mamaritra ny fotoana (amin'ny andro) ilaina hanovana ny firaka amin'ny fivarotana. Ny fomba tsara indrindra dia ny fandrefesana ny hafainganana amin'ny dingana tsirairay amin'ny fantsom-pivarotana sy fivarotana. Rehefa mila mahazo fidiram-bola haingana ianao dia ho azonao antoka fa afaka mahita sy manafoana ny tavoahangy rehetra ao anatin'ilay fizotrany ianao. Ny fandrefesana ny hafainganam-pandeha isaky ny sehatra fitifirana dia manome koa fahitana ny fahombiazan'ny fanovana nataonao.
Ity tabilao etsy ambany ity dia mampiseho ohatra ny hafainganan'ny fitarihana fahaizana mitarika (MQL) rehefa nizotra tamin'ny fantsona tamin'ny taona 2019 sy ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2020:
Araka ny asehon'ireo angon-drakitra ato amin'ity ohatra ity dia nanatsara be ny valin'ny Q1 2020 ny ekipa mpivarotra raha ampitahaina amin'ny Q1 2019. Izany fahitana izany dia manome fampahalalana sarobidy ho an'ny ekipa momba ny mety ho hafainganan'ny programa izay napetraka nandritra ireo fe-potoana roa ireo. Ireo mpivarotra dia afaka mampiasa an'io fahitana io mba hanafainganana ny fotoana amin'ny vola miditra.
Tsy misy mahalala tsara izay ho avin'ny ho avy rehefa misokatra isam-paritra ny orinasa ary miakatra ny hetsika ara-toekarena. Ireo mpivarotra B2B dia efa tsy maintsy nanitsy ny paikadin'ny fampielezan-keviny, ary angamba tsy maintsy averin'izy ireo indray izany rehefa mipoitra ireo lafin-javatra vaovao. Saingy mandritra ny fotoana tsy azo antoka, ny fahaizana misafidy ireo mety ho mpandresy dia zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay. Amin'ny alàlan'ny angon-drakitra sy angovo analytics mety, azonao atao izany.
Tags: b2b marketing nomerikaCovid-19fitarihana mahafeno fepetra marketingmqlfanentananatandroka fivarotana
MVRK: Ny fanombohana ny hetsika Virtual Virtual
SEO eo an-toerana: Inona no atao hoe Citation? Fananganana Citation?